ပိုပြီးအစွန်းရောက်ပစ္စည်းမှစွဲလမ်းနှင့်တင်းမာမှုလက္ခဏာတွေ? လေ့လာမှု ၃၀ ကျော်သည်တွေ့ရှိချက်များကိုညစ်ညမ်းမှုကိုအသုံးပြုခြင်း (သည်းခံမှု)၊ ညစ်ညမ်းသောအကျင့်ကိုကျင့်ခြင်းနှင့်ရုပ်သိမ်းခြင်းလက္ခဏာများနှင့်ကိုက်ညီမှုရှိကြောင်းတွေ့ရှိရသည်.
အဓိကဖြစ်ရပ်သည်ဆေးစွဲခြင်းသိပ္ပံနှင့်ကုသမှုနယ်ပယ်တွင်ဖြစ်ပွားခဲ့သည်။ အမေရိကန်၏စွဲစွဲမှုဆေးပညာ (ASAM) မှအမေရိကန်၏ထိပ်တန်းစွဲပညာရှင်များကသူတို့၏လှုပ်လှုပ်ရွရွလှုပ်ရှားမှုများကိုသာထုတ်ပြန်ခဲ့သည် စွဲလမ်းအသစ်များနှင့်အဓိပ္ပါယ်။ ဤအဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်အသစ်အရလိင်နှင့်ညစ်ညမ်းသောစွဲလမ်းမှုများသည်“ စစ်မှန်သောစွဲလမ်းမှု” များဟုတ်မဟုတ်ဟူသောငြင်းခုံမှုကိုအဆုံးသတ်ထားသည်။ သူတို့က။
မှ ASAM သတင်းထုတ်ပြန်ချက်:
အဓိပ္ပာယ်အသစ်ကိုလေးနှစ်တာကာလအတွင်းအထူးကျွမ်းကျင်သူ ၈၀ ကျော်နှင့်အတူတက်ကြွစွာလုပ်ဆောင်နေသည့်ထိပ်တန်းစွဲအာဏာပိုင်များ၊ စွဲဆေးဝါးကုသမှုဆိုင်ရာဆရာ ၀ န်များနှင့်နိုင်ငံတစ်ဝှမ်းမှ ဦး နှောက်အာရုံကြောသိပ္ပံသုတေသီများမှရလဒ်ထွက်ပေါ်လာခြင်းဖြစ်သည်။ …နှစ်ပေါင်းနှစ်ဆယ်ကြာအာရုံကြောဆိုင်ရာသိပ္ပံပညာတိုးတက်မှုသည် ASAM ကို ဦး နှောက်အတွင်းရှိအရာများအားဖြင့်စွဲလမ်းမှုကိုပြန်လည်ပြုပြင်ရန်လိုအပ်ကြောင်းယုံကြည်ခဲ့သည်။
DSM (American Psychiatric Association's) ကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်နေသောစိတ်ရောဂါအထူးကုများဖြစ်သောကြောင့် ASAM ၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းလည်းဖြစ်နိုင်သည်။ diagnostic နှင့်စာရင်းအင်းလက်စွဲစာအုပ် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရောဂါများ၏) ဖြစ်ရပြီ သူတို့ခြေဆွဲ လာမည့် DSM-5 ကိုအပြုအမူစွဲလမ်းမှုသုတေသနအတွက်တိုးတက်မှုများနှင့်အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်စေရန်။ အစဉ်အလာအားဖြင့် DSM သည်ရောဂါအခြေအနေပေါ် အခြေခံ၍ မဟုတ်ဘဲအပြုအမူများစာရင်းကို အခြေခံ၍ ရောဂါရှာဖွေစစ်ဆေးခြင်းများကိုပြုလုပ်သည်။ DSM စာရေးသူများသည်လိင်မှုဆိုင်ရာအပြုအမူများစာရင်းကိုသဘောမတူနိုင်ခြင်းဖြစ်သောကြောင့် (လိင်မှုကိစ္စကျူးလွန်ခြင်းများကိုညစ်ညမ်းစေသည့်လိင်ဆက်ဆံခြင်းဆိုင်ရာရောဂါ) (ညစ်ညမ်းသောညစ်ညမ်းမှုအသုံးပြုမှုကိုဖော်ပြသည့်) ဖြစ်သည်။ တကယ်တော့သူတို့ကဒီရောဂါကိုနှင်ထုတ်နိုင်ပါတယ် နောကျဆကျတှဲမှဆယ်ကျော်သက်ယောက်ျားလေးများကြားတွင်အင်တာနက်ကိုညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုအဖြစ် -right ဖြစ်လာ နီးပါးတစ်လောကလုံး။ (မှတ်ချက် - လာမည့် DSM-5 ကို beha တစ်ခုမဖန်တီးမီရေးသားခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်vioral စွဲအမျိုးအစား“
မတူတာကတော့, အဆိုပါ ASAM ချက်နှင့်အဓိပ္ပါယ်, "စွဲလမ်းမှု၏ ဦး နှောက်၏အခန်းကဏ္inကိုကြည့်သည်။ ဦး နှောက်အလုပ်လုပ်ခြင်းနှင့် ဦး နှောက်ဆက်စပ်မှုတို့နှင့်အတူဖြစ်ပျက်နေသည့်အရာသည်စွဲလမ်းမှုတွင်တွေ့ရသောအပြုအမူများကိုရှင်းပြနိုင်သည်။ " လိင်မှုဆိုင်ရာအပြုအမူ (ဥပမာအင်တာနက်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုနေ့စဉ်ကြည့်ရှုခြင်း) သည်အခြားသူတစ် ဦး ၏ရောဂါဗေဒကိုရောင်ပြန်ဟပ်ခြင်းမရှိဘဲလူတစ်ယောက်၏ ဦး နှောက်တွင်ရောဂါဗေဒအထောက်အထားဖြစ်နိုင်သည်ဟုအသိအမှတ်ပြုခြင်းဖြစ်သည်။
သုတေသနနှစ်ဦးစလုံးအမူအကျင့်များနှင့်ဓာတုစှဲဦးနှောက်ခန္ဓာဗေဒနဲ့ဇီဝကမ္မဗေဒအတွက်တူညီတဲ့အဓိကပြောင်းလဲပါဝငျကြောင်းပြသထားတယ်။ တစ်ဦး ASAM ပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ်ကရှင်းပြသည်:
အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်အရအရက်သေစာ၊ ဘိန်းဖြူနှင့်လိင်အပေါ်စွဲလမ်းမှုအားလုံးသည်အခြေခံအားဖြင့်အတူတူဖြစ်သည်ကိုသံသယဖြစ်စရာမလိုပါ။ ကနေဒါဆေးစွဲမှုဆေးပညာအသင်းဥက္ကpresident္ဌနှင့်အဓိပ္ပာယ်အသစ်ကိုဖော်ထုတ်သော ASAM ကော်မတီ၏ဥက္က္ဌ Dr. Raju Haleja က“ စွဲလမ်းမှုကိုရောဂါတစ်မျိုးအဖြစ်ရှုမြင်သူများနှင့်ဆန့်ကျင်သည်ကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဆေးစွဲမှုကိုရောဂါတစ်ခုအဖြစ်ရှုမြင်သည်။ ရောဂါများ။ စွဲလမ်းသည်စွဲလမ်းမှုဖြစ်သည်။ သင့် ဦး နှောက်ကိုဘာဖြစ်နေလဲဆိုတာအရေးမကြီးဘူး။ လမ်းကြောင်းပြောင်းလိုက်ပြီဆိုရင်သင်ဟာစွဲလမ်းမှုအားလုံးကိုအားနည်းသွားလိမ့်မယ်။ ” …လိင်၊ လောင်းကစား၊ အစားအသောက်စသည်တို့သည်အရက်သို့မဟုတ်ဘိန်းဖြူသို့မဟုတ်ကြည်လင်သောဆေးများကိုစွဲစွဲလမ်းမှုအရဆေးဘက်ဆိုင်ရာအရတရားဝင်ဖြစ်သည်။
ဆေးစွဲခြင်းသည်အဓိကရောဂါဖြစ်သည်။ စိတ်ရောဂါသို့မဟုတ်ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးမမှန်ခြင်းကဲ့သို့သောစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးပြbyနာများကြောင့်ဖြစ်နိုင်သည်မဟုတ်ပါ။ ဤသည်ကစွဲလမ်းစေသောအပြုအမူများသည်အမြဲတမ်းအခြားရောဂါများကိုသက်သာစေရန်အတွက်“ ကိုယ်တိုင်ဆေးဝါး” ပုံစံတစ်ခုဖြစ်သည်ဟူသောလူသိများသောအယူအဆကိုငြိမ်သက်စေသည်။
စသည်တို့ကို Hypofrontality, သတိထား, desensitization, ပြောင်းလဲစိတ်ဖိစီးမှုဆားကစ်: နှစ်ဦးစလုံးအမူအကျင့်များနှင့်ပစ္စည်းဥစ္စာစွဲလမ်းမှုကိုတူညီသောအာရုံကြော circuitry အတွက်တူညီတဲ့အဓိကပြောင်းလဲမှုများကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါတယ်။
နာတာရှည် "စွဲလမ်းအပြုအမူ" တွင်ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုအထက်ပါ ဦး နှောက်အပြောင်းအလဲများဖြစ်ပွားခဲ့သည်ဖော်ပြသည်။ စွဲလမ်းစေသောအပြုအမူများသည်သတိလစ်။ ပုံမှန်ဖြစ်လာသည်။
အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်အရအင်တာနက်စွဲလမ်းမှုအပါအ ၀ င်အကျင့်စရိုက်များတည်ရှိမှုကိုမကြာခဏစွပ်စွဲလေ့ရှိသည်။
လောင်းကစားခြင်း၊ အစားအစာ၊ ဗီဒီယိုဂိမ်းစွဲသူများ၏ ဦး နှောက်နှင့်မတူဘဲလိင် / ညစ်ညမ်းစွဲစွဲသူများ၏ ဦး နှောက်ကိုမစစ်ဆေးရသေးပါ။ သို့သော်အမူအကျင့်စွဲလမ်းမှု၏ ဦး နှောက်ယန္တရားသည်အလွန်ကောင်းမွန်စွာသတ်မှတ်ထားပြီးဖြစ်သည်။ ကျွမ်းကျင်သူများကလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများသည်စွဲလမ်းစေနိုင်သည်ဟုယုံကြည်စိတ်ချစွာဖြင့်ပြောနိုင်သည်။ တစ်နည်းဆိုရသော်၎င်းသည်လှုံ့ဆော်မှုပုံစံသို့မဟုတ်ပမာဏမဟုတ်ဘဲအကျိုးရလဒ်ဖြစ်သော ဦး နှောက်ပြောင်းလဲမှုဖြစ်သည်။ ASAM ၏မကြာခဏမေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများမှဤကောက်နုတ်ချက်များသည်စွဲလမ်းမှုအားလုံး၏ဘုံသိပ္ပံကိုရှင်းပြသည်။
အဖြေ: အတိတ်အတွက်အာရုံစိုက်ထိုကဲ့သို့သောအရက်, ဘိန်းဖြူ, ဆေးခြောက်, ဒါမှမဟုတ်ကင်းအဖြစ်စွဲလမ်းနှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများပေါ်တွင်ယေဘုယျဖြစ်ခဲ့သည်။ ဤအဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်အသစ်အရမူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုသည်မူးယစ်ဆေးဝါးမဟုတ်ပါ၊။ ဒါဟာသူတို့ကိုတစ်ဦးစှဲလမျးသူလုပ်မယ့်သူတစ်ဦးကိုအသုံးပြုသည်အဆိုပါတ္ထုများမျှမက, ဒါကြောင့်အသုံးပြုမှုပင်အရေအတွက်သို့မဟုတ်အကြိမ်ရေမဟုတ်ပါဘူး။ စွဲလမ်းမှုဆိုသည်မှာလူတစ် ဦး ၏ ဦး နှောက်တွင်အကျိုးရှိသောအရာများသို့မဟုတ်အကျိုးဖြစ်ထွန်းစေသည့်အပြုအမူများနှင့်ထိတွေ့မိသောအခါဖြစ်ပျက်သောအရာဖြစ်သည်။ ထို့အပြင်၎င်းသည် ဦး နှောက်နှင့်ဆက်စပ်သော ဦး နှောက်ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံနှင့်စပ်လျဉ်း။ ဆုလာဘ်များနှင့်ပတ်သက်သောအချက်အလက်များနှင့်တိုက်ထုတ်မှုအားဆုချသည့်ပြင်ပဓာတုပစ္စည်းများသို့မဟုတ်အပြုအမူများထက်ပိုမိုသောအချက်ဖြစ်သည်။ (အလေးပေးဖော်ပြခဲ့သည်။ )
စွဲမအောင်မြင်အသုံးပြုမှုကိုထိန်းချုပ်ရန်ကြိုးစားမှု, abstinence ကာလအတွင်းမှာမတရားသောနှင့်ဆုတ်ခွာရောဂါလက္ခဏာတွေအဖြစ်အပြုအမူအတွက်ပေါ်လာရာဘုံဦးနှောက်အပြောင်းအလဲမျှဝေပါ။ ယနေ့အထိ, ရှိသမျှစွဲတွင်တွေ့မြင်အခြေခံဦးနှောက်အပြောင်းအလဲများကို (desensitization, သတိထားရနှင့် hypofrontality) ရှိ ပြီးသားလေ့လာတွေ့ရှိခဲ့ ဗီဒီယိုဂိမ်းကစားသူများ၏ ဦး နှောက်တွင်ဖြစ်သည်။ သူတို့ဟာဒီနေ့ညစ်ညမ်းတဲ့ညစ်ညမ်းတဲ့သူတွေကိုပါတွေ့ရမှာပါ။ လမ်းလျှောက်မယ်၊ စကားပြောမယ်၊ ဘဲလိုဘဲပြုမယ်ဆိုရင်ဒါဟာဘဲဘဲ။ (နောက်ဆုံးသတင်း: ကင်းဘရစ်တက္ကသိုလ်က: ဦးနှောက် Scan ဖတ် porn စွဲကိုရှာဖွေ)
ASAM ၏ကြေငြာချက်၏နောက်ဆက်တွဲတစ်ခုမှာကြည့်ရှုသောအချိန်သို့မဟုတ်စောင့်ကြည့်နေသည့်အမျိုးအစားများအားဖြင့်“ အပြာစွဲခြင်း” ကို သတ်မှတ်၍ မရပါ။ Porn စွဲသက်ဆိုင်ရာဦးနှောက်ပြောင်းလဲမှုများကိုကြည့်ရှုသူအတွက်ဖြစ်ပွားခဲ့သည်ကြမှသာလြှငျတည်ရှိ။ ဦး နှောက်ကိုစူးစမ်းလေ့လာခြင်းသည်လက်တွေ့မကျသောကြောင့် ASAM သည် ဦး နှောက်ပြောင်းလဲသွားပြီဆိုလျှင်လူများကိုတွက်ချက်ရန်အတွက်အပိုင်းငါးပိုင်းအကဲဖြတ်ထားသည်။ ဤသည် telltale လက္ခဏာတွေဝေဖန်ခံရလူနာများတွင်ဆီးချိုရောဂါအမှတ်အသားများအကဲဖြတ်ဆင်တူသည်။
အထူးသ ASAM လိပ်စာလိင်နှင့်အစားအစာစှဲထံမှဤရွေ့ကားလာမယ့်မေးခွန်းနှစ်ခု:
အဖြေ: လောင်းကစားဝိုင်းမှစွဲလမ်းကောင်းစွာအများအပြားဆယ်စုနှစ်များအတွက်သိပ္ပံနည်းကျစာပေများတွင်ဖော်ပြထားခဲ့သည်။ တကယ်တော့ခုနှစ်, DSM (DSM-5) ၏နောက်ဆုံးပေါ်ထုတ်ဝေပစ္စည်းဥစ္စာအသုံးပြုမှုမမှန်နှင့်တူညီသောအပိုင်းအတွက်လောင်းကစားဝိုင်းရောဂါစာရင်းပြုစုပါလိမ့်မယ်။
အသစ် ASAM ချက်နှင့်အဓိပ္ပါယ်စွဲလည်းကြိုးဖြစ်ကြောင်းအပြုအမူတွေမှဆက်စပ်သည်မည်မျှဖော်ပြအသုံးပြုပုံရုံပစ္စည်းဥစ္စာမှီခိုနှင့်အတူစွဲ equating ကနေထွက်ခွာစေသည်။ ဒီအစွဲက "ပစ္စည်းဥစ္စာမှီခိုမှု" တစ်ခုတည်းမဟုတ်ကြောင်းတရားဝင်ရာထူးမှပထမဆုံးအကြိမ်ခေါ်ယူခြင်းဖြစ်သည်။
ဤသည်နှင့်အဓိပ္ပါယ်စွဲလုပ်ငန်းဆောင်တာများနှင့်ဦးနှောက် circuitry အကြောင်းနှင့်မည်သို့စွဲလမ်းနှင့်အတူပုဂ္ဂိုလ်များရဲ့ဦးနှောက်၏ဖွဲ့စည်းပုံနှင့် function ကိုစွဲရှိသည်မဟုတ်ကြဘူးတဲ့သူပုဂ္ဂိုလ်များ၏ဦးနှောက်၏ဖွဲ့စည်းပုံနှင့် function ကိုကှာခွားကပြောပါတယ်။ ဒါဟာဦးနှောက်နှင့်ဆက်စပ် circuitry အတွက်ဆုလာဘ် circuitry အကြောင်းကိုပြောသွားပေမယ်အလေးပေးအကျိုးကို system ပေါ်တွင်ပြုမူသောပြင်ပဆုလာဘ်အပေါ်မဟုတ်ပါဘူး။ အစားအစာနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများနှင့်လောင်းကစားခြင်းအပြုအမူများသည်ဤစွဲလမ်းမှုအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်တွင်ဖော်ပြထားသော“ အကျိုးကျေးဇူးများကိုလိုက်စားခြင်း” နှင့်ဆက်စပ်နိုင်သည်။ (အလေးပေးသောကဆက်ပြောသည်။ )
အဖြေ: ငါတို့အားလုံးသည်အစားအစာနှင့်လိင်မှုကိစ္စကိုအကျိုးပြုစေသော ဦး နှောက်ဆုချခြင်းအစီအစဉ်ရှိသည်။ ဒါကရှင်သန်ရပ်တည်ရေးယန္တရားတစ်ခုပဲ။ ကျန်းမာသော ဦး နှောက်တစ်ခုတွင်ဤဆုများ၌ကျေနပ်ရောင့်ရဲမှုအတွက်တုံ့ပြန်မှုယန္တရားများရှိသည်။ စွဲလမ်းနေသူတစ် ဦး အတွက်တိုက်နယ်သည်အလုပ်မဖြစ်သောအရာဖြစ်သဖြင့်လူတစ် ဦး ချင်းစီ၏မက်ဆေ့ခ်ျသည်“ ပိုမို” ဖြစ်လာလိမ့်မည်။ ၎င်းသည် ၀ တ္ထုများနှင့်အပြုအမူများအသုံးပြုခြင်းဖြင့်ဆုလာဘ်များနှင့် / သို့မဟုတ်ကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းများကိုရောဂါဗေဒနောက်သို့လိုက်သွားစေသည်။
တိုတောင်းသောများတွင်လိင်စွဲတည်ရှိ, ထိုသို့အတွင်းမူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုအဖြစ်ဦးနှောက်ဖွဲ့စည်းပုံနှင့်ဇီဝြဖစ်စဉ်အတွက်တူညီတဲ့အခြေခံကိုပြောင်းလဲကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ ဤသည်ပြီးပြည့်စုံသောအသိကိုမှန်ကန်စေသည်။ ပြီးနောက်ရှိသမျှတို့, စွဲလမ်းမူးယစ်ဆေးဝါးများဘာမျှမလုပ်ပေးပေမယ့်ပုံမှန်ဇီဝလုပ်ငန်းဆောင်တာကိုတိုးမြှင့်သို့မဟုတ်လျော့ကျသွားသည်။ ဒါကြောင့်လည်းအစွန်းရောက်သဘာဝကဆုလာဘ်ဗားရှင်း (junk အစားအစာ, အင်တာနက်ကို porn) လုပ်နိုင်ကွောငျးထငျရှားဖြစ်သင့်ဒီတော့သူတို့က, သဘာဝဆုလာဘ်ဘို့အာရုံကြောဆားကစ် hijack သူတို့အားဆားကစ် hijack.
ယနေ့ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးသူများနှင့်လူကြိုက်များသောအကြံဥာဏ်ဆောင်းပါးရှင်များသည်အင်တာနက်ညစ်ညမ်းမှုကိုအသုံးပြုခြင်း၏အန္တရာယ်များနှင့် ပတ်သက်၍ မကြာခဏလှည့်စားခံနေရသည်။ အကြောင်းမှာတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်း (ညစ်ညမ်းခြင်းမရှိဘဲ) တစ်ကိုယ်ရေရာဂစိတ်ဖြေခြင်းသည်တစ်ခါတစ်ရံတွင်စွဲလမ်းမှုကိုဖြစ်စေသည်။ ပြpornနာကအင်တာနက်ညစ်ညမ်းမှုပဲ မဟုတ်မျှသာတစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေ။ တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေနှင့်အင်တာနက်ညစ်ညမ်းအတူတူဖြစ်ကြောင်းအဆိုပါယုံကြည်ချက်စဉ်ဆက်မပြတ်အသစ်အဆန်း၏အလားအလာဦးနှောက်အပေါ်သက်ရောက်မှုများ၏နားလည်မှုမရှိခြင်းပေါ်ထွန်းရေးဖြစ်သည်။ ပုံမှန်အားဖြင့်တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေမွတ်မပြေ၏ခံစားချက်များကိုစေပါတယ်။ ဆနျ့ကငျြ, အင်တာနက်ညစ်ညမ်းနိုင် အပေါ်မှထပ် သဘာဝအမွတ်မပြေ။ တချို့ဦးနှောက်အတွက်, သဘာဝအမွတ်မပြေနိုင်သော၎င်းအား အစွန်းရောက်ဆွနှင့်အတူစွဲ-related ဦးနှောက်အပြောင်းအလဲများကိုဖို့ချောဆင်ခြေလျှောဖြစ်ပါတယ်။ လူနာ / client များ / စာဖတ်သူများမှဆင်းရဲသားကိုအကွံဉာဏျ၌ဤနားလည်မှုလွဲရလဒ်များကို။
သုတေသီများတစ်နေ့နေ့မှာအင်တာနက်ကိုညစ်ညမ်းစွဲ၏ဦးနှောက်ထဲသို့ကြည့်ရှုသောအခါ, သူတို့ပြီးသားအင်တာနက်ကိုစွဲ၏အခြားမျိုးအတွက်စောင့်ကြည့်လေ့လာပြောင်းလဲမှုများကြည့်ဖို့သေချာပါသည်။ အို porn-စွဲသုတေသနစိတ်ညစ်စရာစိန်ခေါ်မှုများရင်ဆိုင်နေရ:
၁။ အင်တာနက်၊ အင်တာနက်မဟုတ်သောညစ်ညမ်းသောအသုံးပြုသူများကိုထိန်းချုပ်နိုင်သည့်အုပ်စုများကိုမတွေ့ရပါ။ ပြန်လည်သုံးသပ်သည့်ဘုတ်အဖွဲ့များသည်ညစ်ညမ်းမှုအမျိုးအစားများကိုတစ်နေ့လျှင်နာရီပေါင်းများစွာကြည့်ရှုရန်တောင်းဆိုသည့်ပရိုတိုကောများကိုအတည်ပြုလိမ့်မည်မဟုတ် ဒီနေ့လူငယ်တွေစောင့်ကြည့်နေကြတယ်
၂။ မရေရာသောမေးခွန်းများ (ဦး နှောက် Scan ဖတ်ချက်များနှင့်မတူဘဲ) သည်ညစ်ညမ်းသောအသုံးပြုသူများအားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းဆောင်ရည်ဆိုင်ရာပြproblemsနာများ (သို့မဟုတ်လူမှုရေးစိတ်ပူပန်မှု၊ စိတ်ဓာတ်ကျခြင်းသို့မဟုတ်အာရုံစူးစိုက်မှုပြproblemsနာများ) ကိုအင်တာနက်ညစ်ညမ်းမှုအသုံးပြုခြင်းနှင့်ချိတ်ဆက်ရန်ခက်ခဲစေသည်။ နောက်ဆုံးတွင်၊ porn သည်ကမ္ဘာပေါ်တွင်ယုံကြည်စိတ်ချရဆုံး aphrodisiac ကဲ့သို့ထင်ရပြီးသုံးစွဲသူများသည်အသုံးပြုနေစဉ်အမြဲတမ်းစိတ်ချမ်းသာကြသည်။ ၎င်းသည်ယာယီပျောက်ကင်းစေသောပြproblemsနာများကိုမည်သို့ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သနည်း။
သာကျယ်ပြန့်စွဲလမ်း၏အသိပညာ, ၎င်း၏ရောဂါလက္ခဏာတွေ, နှင့်၎င်း၏ etiology နှင့်အတူသုတေသီများနှင့်၎င်းတို့၏ဘာသာရပ်များမှန်ကန်စွာအကျိုးသက်ရောက်မှုနှင့်အတူအကြောင်းမရှိဆက်သွယ်နိုင်သည်။ အဆိုပါ ASAM ကြေညာချက်သည်ဦးနှောက်ပြောင်းလဲမှုများမှန်ဘီလူးမှတဆင့်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးအတွက်သုတေသီများထောက်ခံပါတယ်။
ASAM ၏ကြေငြာချက်သည်ကုထုံးပညာရှင်များနှင့်သူတို့၏ဖောက်သည်များအားပြန်လည်သင်ကြားပေးခြင်းအတွက်ရှေ့သို့ခြေလှမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ လူအများအားမှားယွင်းစွာသွန်သင်ခြင်းအားဖြင့်အပြုအမူအားဖြင့် ဦး နှောက်ကိုအလွန်အမင်းခန့်မှန်းခြင်းမှလိင်အပြုအမူဆိုင်ရာစွဲလမ်းမှုမဖြစ်နိုင်ကြောင်းပြောကြားခဲ့သည်။ ၎င်းအစားဖောက်သည်များအနေဖြင့်လိင်မှုဆိုင်ရာအပြုအမူကိုစွဲလမ်းမှုသည်ဘယ်သောအခါမျှစွန့်စားမှုမဟုတ်ကြောင်း၊ ဖောက်သည်တွင်အခြား (မကြာခဏမျိုးရိုးဗီဇ) ရောဂါများမဖြစ်ပွားပါကဖောက်သည်များအားအာမခံပေးရန်လေ့ကျင့်သင်ကြားခဲ့သည်။
သို့သျောလညျး ASAM စာရေးဆရာများမျိုးရိုးဗီဇသာစွဲလမ်းတဝက်အကြောင်းရင်းနှင့်ပတ်သက်ပြီးတက်အောင်ခန့်မှန်းကြသည်။ ဒီအစွဲကို pre-ရှိပြီးသားအခြေအနေမရှိခြင်းအတွက်ဖွံ့ဖြိုးနိုင်မကိုဆိုလိုသည်။ ထိုကဲ့သို့သောစိတ်ကျရောဂါ, လူမှုရေးစိုးရိမ်ပူပန်မှုကဲ့သို့သောအခြားစကားလုံးများ, porn-related လက္ခဏာတွေခုနှစ်, နုပျိုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းဆောင်ရည်ဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များနှင့်အာရုံစူးစိုက်မှုပြဿနာကိုတတ်နိုင်သမျှအဖြစ်ရှုမြင်ခံရဖို့လိုအပ် အကျိုးဆက်များ စွဲလမ်း၏, အစားအစဉ်အမြဲသူတို့ရဲ့ဖြစ်ယူဆခံရ အကွောငျး.
စွဲလမ်းမှုဆေးဝါးဆိုင်ရာကြေညာချက်အသစ်သည်လိင်နှင့်အပြာစွဲစွဲနေသောဖောက်သည်များသည်သူတို့၏အပြုအမူကိုအခြေခံကျသောပြောင်းလဲမှုများပြုလုပ်ရန်ကုထုံးဆရာများအားတာဝန်ရှိစေသည်။ ယခုအချိန်တွင်တိုင်ပင်ဆွေးနွေးသူများစွာသည်စိတ်ကိုပြောင်းလဲစေသောဆေးဝါးများနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတိုးမြှင့်ဆေးများအတွက် ၀ န်ဆောင်မှုခံယူသူများကိုရည်ညွှန်းသည်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင်သူတို့၏လိင်အပြုအမူသည်ပုံမှန်ဖြစ်ပြီးအန္တရာယ်ကင်းကြောင်းသူတို့ကိုအာမခံနေခြင်းဖြစ်သည်။
အဆိုပါ ASAM ကြေညာချက်အသံဦးတည်ချက်အတွက်ကြီးမားတဲ့ခြေလှမ်းဖြစ်ပါတယ်။ တွင် ဒီ postကျနော်တို့တိကျတဲ့ရောဂါလက္ခဏာတွေ porn အသုံးပြုသူများအစွဲ-related ဦးနှောက်အပြောင်းအလဲများကိုညွှန်ပြစေခြင်းငှါအရာ, သတင်းပို့စဉ်းစားပါ။
ဒါကိုမေလ ၂၀၁၃ မှာကြည့်ပါ။ စိတ်ကျန်းမာရေးအမျိုးသားသိပ္ပံ (NIMH): DSM ချို့ယွင်းချက်များနှင့်ခေတ်မမီတော့ဖြစ်ပါတယ်။